Ballparker: Abuur Qiyaasyo si fudud | Martech Zone
Ballparker: Abuur Qiyaasyo si fudud
Wednesday, September 17, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
The qaybta awoodsiinta iibka ayaa ka qarxaya koritaanka, iyada oo shirkado aad u tiro badani ay aqoonsadeen in shaqada iibku ay waxoogaa iska beddeleen sannadihii la soo dhaafay. Waqtiga rajadu kugu soo dhacayso, waxay kugu baareen adiga iyo kuwa kula tartamaya intarnetka, waxay fahmeen awoodaada iyo daciifnimadaada waxayna si fudud u doonayaan inay hoos ugu dhacaan soo jeedinta.
Qeyb ka mid ah waaxda tikniyoolajiyadda karti-siinta iibinta ayaa ah inay ka caawiso ganacsiyada si fudud dhisidda iyo qaybinta qiyaasaha, xigashooyinka, soo-jeedimaha iyo jawaabaha RFPs (codsi soo-jeedin). Waxaa jira tiro sii kordheysa oo xalal ah oo ka jira halkaas, laga bilaabo xalalka desktop desktop ee ku milmaya Word, iyada oo loo marayo xallinta soo-jeedinta calaamadeysan ee awooda iyo wadahadalka, illaa iyo xalalka miisaanka fudud ee horumarinta qiyaasaha.
Aasaasaha David Calvert wuxuu ka soo shaqeeyey warshada wakaalada in ka badan toban sano wuxuuna ku arkay booska Ballparker. Ballparker waa madal nadiif ah oo wanaagsan, oo si gaar ah loogu talagalay in lagu sameeyo habka qiimeynta shaqooyinka mustaqbalka si dhakhso ah oo fudud. Tan waxaa lagu gaaraa iyadoo laga dhigayo madal ku habboon dhammaan qalabka moobiilka iyo kombiyuutarada desktop-ka. Barxadda ayaa had iyo jeer laga heli karaa iyada oo loo marayo daruur, U oggolow qof kasta oo loo xilsaaray abuurista qiyaasaha inuu ku sameeyo halka uu joogo, xafiiska ka fog ama miiskiisa dib ugu laabo.
Marka qiyaasta la soo saaro ama isla markiiba emayl ayaa looga diri karaa aaladda moobaylka ama waa laga tagi karaa ilaa qofku ku noqdo xafiiska. Ballparker sidoo kale wuxuu soo bandhigayaa qalab warbixineed oo isbarbardhig ku samayn kara shirkadaha kale ee isla qaybaha ama goobaha, markaa adeegsadayaashu way arki karaan sida wanaagsan ee ay wax uga qabanayaan shirkadaha kale ee la midka ah ee iyaguna nidaamka adeegsada.
Tags: baalleeyahaDavid calvertqiyaas softwaresoo jeedinta softwarexigasho softwarexigasho
14 Istaraatiijiyadaha Kordhinta Dakhliga ee Goobtaada Ganacsiga